सेतो मच्छेन्द्रनाथ रथ यात्रा सुरु (फोटो फिचर) « प्रशासन
सेतो मच्छेन्द्रनाथ रथ यात्रा सुरु (फोटो फिचर)
काठमाडौं (रासस) । चैत्र शुक्ल अष्टमीका दिन शुरु गरिने सहकालका देवता सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथ यात्रा शुरु भएको छ ।
चैत्र शुक्ल अष्टमीका दिन तीनधारा पाठशालाबाट शुरु हुने रथयात्रालाई आज तानेर असनसम्म पुर्याइन्छ । दोस्रो दिन असनबाट हनुमानढोकास्थित कालभैरवसम्म, तेस्रो दिन कालभैरवबाट लगनटोलसम्म पुर्याइन्छ ।
चौथो दिन लगनमा रथ घुमाइन्छ । पाँचौँ दिन मूर्तिलाई सानो रथमा राखी लगनटोलबाट मच्छेन्द्रबहालसम्म यात्रा चलाइन्छ । यसरी चैत १५ गते सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथ यात्रा सकिने गुठी संस्थान काठमाडौं शाखाका प्रमुख बैकुण्ठ रेग्मीले जानकारी दिए ।
यसवर्ष रथ निर्माणका लागि रु चार लाख र रथयात्रा चलाउने एवं मच्छेन्द्रनाथको पूजाआजा चलाउने रैरकमीलाई खानगीलगायत शीर्षकमा रु चार लाख बजेट व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
आइतबार बिहान अष्टमी हुँदा नै सूर्योदय हुने भएकाले सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रा पनि आजै शुरु भएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले स्वीकृत गरेका पात्रोमा उल्लेख गरिएको अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले बताए ।
यसैगरी चैत्र शुक्ल नवमीमा मनाइने रामनवमी पर्व पनि आजै देशभरका श्रीरामचन्द्र मन्दिरमा श्रद्धा भक्तिसाथ पूजा आराधना गरी मनाइयो ।